Di Matteo oo doonaya in Chelse ay heysato Lampard iyo Cole. - Caasimada Online
Home Warar Di Matteo oo doonaya in Chelse ay heysato Lampard iyo Cole.
Di Matteo oo doonaya in Chelse ay heysato Lampard iyo Cole.
Roberto Di Matteo ayaa doonaya inuu arko Frank Lampard oo xirfadiisa kusoo afjaraya Chelsea. Wuxuuna tababaraha Blues sidoo kale ku qalqaalinayaa Ashley Cole inuu joogo Stamford Bridge.
Labada ciyaaryahan ee heerka caalami ee dalka England ayuu waxaa xagaaga ka dhacaaya qandaraaskooda kooxda ka dhisan Galbeedka London.
Daafaca dambeedka bidix, waa 31 jir, wuxuuna diirada u saaran yahay tababarihiisii hore Carlo Ancelotti oo haatan leyliya Paris Saint-Germain, inkastoo ay Chelsea ka dalbatay hal sano oo qandaraaska loogu kordhinaayo.
Laakiin Lamps, waa 34 jir, welina lagama dalban wax heshiis ah, wuxuuna Super Frank sheegay inuu ka welwelaayo arinka.
Kooxda Shiinaha ka dhisan ee Guizhou Renhe ayaa wadahadal la furtay Lampard, kaasoo Chelsea kula guuleystay sedax horyaal oo Premier League ah. Afar FA Cup, afar League Cup iyo Uefa Champions League intii lagu jiray 12kii sano ee uu la joogay Blues.
“Wey ogyihiin inaan anigu jeclahay inay sii joogaan. Waa ciyaaryahano cajiib ah kuwaas oo mar walba noogu ciyaara heerka ugu sareysa,” ayuu yiri Di Matteo.
“Waan sameynayaa wax walba oo aan halkaan kula sii ilaashan karo.
“Waxaa jira had iyo jeer warar ku saabsan Frank. Wararka xanta ahi waxay sheegayeen inuu u socdo sidoo kale MLS [Horyaalka Mareykanka].
“Waxaan ku rajo weynahay inaan qandaraas cusub ka dalbano. Laakiin midaasi waxay ka dhexeyneysaa kooxda iyo ciyaaryahanka inay isku raacaan.
“Laakiin kuma qanacsani sida ay wadahadaladu u socdaan laakiin hadii ay labada dhincac is afgartaan, Frank wuu nala sii joogi doonaa.
“Wuxuu Chelsea u ahaa horjooge mudo 10 sano ah, marka waxaan jeclaan lahaa inuu halkaan kusoo afjaro xirfadiisa ciyaareed.
“Sidoo kale Ashley, kuma qanacsani inuu la hadlo kooxda Faransiis ah, sidaas darteed ma hubo inuu u dhaqaaqo Paris!”